Uumaani Oromoo, Waraani fi Miseensoon OPDO baratoota Oromoo degeruu qabu.
Wayyanen Bartoota Oromoo seeran Hasofsisuu mana Waraana biyyolessan rukutuun ishee tufii Oromoof qaban waan ta'eef dhalii Oromoo hundi waan dandayeen wayyanee dura dhabachuu qaba. Wayyanen uumataa Oromoo na filladhuu jeechuuf deemtuu ijoolee isaa amoo raassasa waraanaan fixuun yakka yakka caaluu waan ta'ee lammiin Oromoo hundi ijoolee isaa irra goruu qaba.
Haawwasi Oromoo biyya alaa jiruu Bartootaa Oromoo biyya keessa diina falmataa jiranf degersa waan hunda goochuu fi meesha, gorsa, malaqan qabsoo biyya keessa tumsuu bakka barbachisuti biyya galudhan qabsooti dabalamuun ama.
WBO humana qabuu hunda biyya keessati namoota ogummaa waraan qaba gurmessun kan Ogummaa hin qabnee leenjisuun Oromoo fixiinsaa irra bararun ama jeena. Waaran Oromoo, Polisiin Oromoo fi Humini dafee qaqaba Oromiyya Meesha qabdan wayyanen irrati galgalchudha Bartoota Oromoo Cinnaa akka hiririrtan isiin gaafana. Miseensoon OPDO yeerooti hamùtuu fi TPLF Oromoo fixxa jirtu kana lamiii keessan birra akka dhabatan isiin gaffana?.
Mootummaan Ethiopia Baratoota Oromoo irrati jeequmsa banuu isaaf ragga qabatamatuu jira:- 1faa. Mootummaan jeequmsa humee lubu badeef dhifma hin gaffanee; 2faa ijoolee baratota heedu utuu hidha jiran walgaii wamuu irra ijoole hidhaman gadii dhisee araraf mariiachuu qaba ture; 3faa ijoolee Oromoo mana barumsaa irra argiataman deebisuu qaba ture, 4faa Master Planin dhigga baratoota heeduu dhagamasisee sun haqamuu isaa mootumman baratoota fi umatatii labsuu qaba ture. Mootumman badii hojeete akassiti siirefatee Barotoota waliin ararafi marii adeemsisuu qaba malee waan hunda human anatuu murtessa jeecha marii ta'uuf ijoolee waamuun jeequmsa dabalatan humee jira. Amasi mootumman badii irrati badii dalaga jirachuu isaa Uumanii Oromoo beekuu qaba.
Baratoon Oromoo Walga’ii wayanee Mormachuu qabu !!!
Baratoota Oromoo Kafalti durgoo tokko malee Zoon tokko fudhee Zooni tokkoti geesudhan ijoolee Oromoo maqa walgaiiti balaa konkolatan midhamanfi Beenya kafalamuu qaba. Baratoota Oromoo walgaii adeemanf durgoon sadarka Ogannoota TPLF shalagamee kafalamuuf qaba. Ethiopian mirga baratoota kan sarbu fi brumsaa bilisumman kan kessati hin gegegfamne wagga waggan bartatooni baklka iti ajeefaman waan ta'eef beekamti universitoota adunya akka hin arganee gafatamee jira.
Ethiopian Baratoota University samuu bilisan akka hin baraneen baratoota akka yakkamtoota fi diinati kan ilaaltu, bara baran baratoota kan ajeeftuu, hitee torchi gootuu; barumsa irra Baratoota Oromoo qoofati foote barumsaa irra kan arituu waan ta'eef UNSCO fi UNSEF mirga baratoota Ethiopia irrati dhibaan goodhamuu dhabachuu akka qabuu gaafachuun dirqama. Kun ta'uu bana Ethiopia keessa kan jira Universityn hund akka degersa University adunya kami iyuu hin arganee goochuuf gaafiin siirnan dhiyeesun murteesadha.
Mootii Mootummaa yaakka tokko malee Hidhamee gadii dhifamuu qaba!! Baratooni Oromoo Mana hidha jiran hundi gadii dhifamuu qabu !!! Falmatoon mirga dhala nama UN fi ICC yaakka Baratoota Oromooo irrati raawwatamee Yaakkaa duguga sanyii baleesuti falmaan keenya itti fufa. Baratoon Oromoo utuu hundi isaan gadii hin dhfamiin Mariin TPLF waliin goodhamuu hin milka'uuu.
Dargagoon Walga'ii wayyanen hunda irrati yaaka wayyanen Baratoota Oromoo irrati gegesuu ajeecha, hidha, mana barumsati ariatamuun akka dhabatuu utuu kun hin ta'iin mootuumma kan waliin hariroo tokko ilee akka hin qabnee ibsachuu qabu. Master Planin Dhigga Oromoo heedu dhangalasisee akka haafuu, Godini adda Oromiyyaf Master Plani kan qoophesuuf Mootuuumaa Oromiyyati Malee Federali Mirga tokko ilee akka hin qabnee falmachuu qabuu. Finfinneen maatan ishee Oromiyya jalati akka bultuu walga'ii kana iraati tokkuman falmachuu qabuu. Mootuuman Federala lafa Naannoo kami irratu mirga hin qabu lafi kan Mootummaa Naannoolee qoofa ta'uu ibsachuu qabu. Mootummaan Master Plani seeran ala qoophese jeequmsa kasuu isaati ittigafatamu qaba. Jeequmsa kanaaf sababi mootuumaa Heera Federalaa biyyati cabsee lafa Oromiyya fudhachuuf karorfachuu isaati malee Baratoon Oromoo jeequmsaaf sababa akka hin ta'iin falmachuu qabuu. Walgaii kana utuu hin goodhamin dura durso mootummaan:1. Baratoota du'aanf gumma kafalmuu qaba 2. Baratoota fi Oromoo dhimmaa kanan hidhaman hunda gadii dhisuu qaba, 3. Baratoon Barumsa irra ariataman Barumsati deebiyuu qabuu, 4. Master Plani yakka kun gutuman gututi hafuu qaba kan jeedhu Haala duree walfga'ii kanaa ta'uu qaba.
Mootii Mootummaa yaakka tokko malee Hidhamee gadii dhifamuu qaba!! Baratooni Oromoo Mana hidha jiran hundi gadii dhifamuu qabu !!! Falmatoon mirga dhala nama UN fi ICC yaakka Baratoota Oromooo irrati raawwatamee Yaakkaa duguga sanyii baleesuti falmaan keenya itti fufa. Baratoon Oromoo utuu hundi isaan gadii hin dhfamiin Mariin TPLF waliin goodhamuu hin milka'uuu !!!!!
Yakka Bartoota Oromoo irrati ga’rrf mootumma TPLF ICCti dhiyeesun dirqama keenya, namii TPLF waliin hiriree hundi akka Ogannota dargii sun adabii cimma argachuu qabu.
Falamii kanaaf raggan jiru kan isiin gargaruu kunooti:-